China Yakachengeteka, isina moto simbi, zvigunwe zvigunwe kodhi kukiya, ese marudzi efekitori akachengeteka uye vagadziri | Boda
Nekuvandudzwa kwesainzi uye tekinoroji, yakachengeteka yanhasi yakagadziriswa kubva pane yakapusa anti-kuba basa kune angangoita zvisingaverengeke mhando, senge anti-kuba, kudzivirira moto, anti-kuba, moto-chiratidzo, anti-magnetic, imba, bhizinesi, hotera , pfuti, zvinyorwa, data, nezvimwe.
Nekuda kweayo yakasarudzika basa fenicha uye anti-kuba, yakanyanya kutariswa inofanirwa kubhadharwa kusarudzo yechengetedzo. Kusarudzwa kwechengetedzo kunogona kutariswa kubva kune anotevera maficha:
1.Steel ndiro yezvinhu kusarudzwa: kusiyanisa kubva pakukora, zvinhu uye mabviro eplate yesimbi, ayo anoenderana nekutakura kugona kweakachengeteka kana uchishandisa maturusi akadai semagetsi ekuboora uye kucheka.
2.Forming uye Welding: tarisa kana cabinet muviri rakaumbwa panguva imwe chete, tarisa kana mukaha pakati musuo cabinet uye musuo furemu, uye kana chinja iri kuchinja. Kana mukaha wacho wakanyanya kukura, iyo anti prying basa inoshaya simba. Zvekuchengetedza moto, gaka rakakura kwazvo haribvumidzwe.
Chimiro chetsika: Iyi ndiyo musimboti weiyo yakachengeteka. Nekuti iri mubhokisi, mushandisi haakwanise kuzviona, asi ndiyo kiyi yekudzivirira tekinoroji kuvhura. Vashandisi vanogona kukumbira mutengesi kuti avhure kavha yekumashure kuseri kwepanhi remusuwo kuti aone kana chimiro chetsika chemukati chakanyatsoita uye kana iko kutapurirana kuri kuchinjika. Uye zvakare, isu tinofanirwa kutarisa chimiro cheyakavhara bhaudhi. Dhayamita yekiyi bhaudhi inofanira kukosheswa. Ikozvino yakakurumbira bhaudhi fomati ine yakanaka anti kuvhura mhedzisiro.
4.Lock: kana echinyakare chimiro chiri chepamusoro, saka kukiya ndiyo yakakosha poindi. Kuparadza kiyi kana kuteedzera kiyi kwakaenzana nekuparadza moyo weiyo anti-kuba mashini. Kukomberedza kwakaomarara kunogona kudzivirira kukanganisa uye kuteedzera kwakakosha.
Zvikamu zvebetsero: kugadziriswa kwezvipenga zvikamu kunofanirwa kuona kuvimbika kwekuita kwavo kuti vakunde nemamiriro ekuchinja-shanduka enzvimbo.
6.Alarm basa: pane otomatiki alarm inoshanda, uye pasi pemamwe mamiriro ezvinhu iyo otomatiki alarm inogona kupihwa (sekufamba, kurova kana matatu asiri iwo makodhi). Ehezve, iyo yakapfuma mamiriro ekumisikidza, zvirinani. Parizvino, safesi zhinji hadzina otomatiki alarm yekushanda, kana pane mashoma otomatiki maalarm activation mamiriro. Iwe unofanirwa kubvunza zvakajeka kana uchitenga.
7.Anti corrosion kurapwa: kana izvi zvikasabatwa zvakanaka, zvinokanganisa kuoneka kwebhokisi, uye mune zvakakomba zviitiko, zvinokonzeresa kukuvara kwebasa racho. Iko mukati nekunze kweiyo anti-kuba yakachengeteka inofanirwa kuvezwa, kupuratirwa mapurasitiki uye imwe nzvimbo yekurwisa-ngura kurapwa. Zvokuimba njodzi.
8.Kuonekwa: hukuru uye husina kutsarukana haisisiri nzwisiso yevatengi yeiyo yakachengeteka. Vanhu vari kuzvibata sekushongedza imba. Chekutanga pane zvese, cherekedza kana pamusoro pacho pakatsetseka uye kuti pendi yakatofanana. Kechipiri, cherekedza kana iwo mavara uye chimiro zviri zvemhando yavo yavanofarira, uye sangana pamwe neicho chaicho hofisi nharaunda kutenga.
9.Size: kuyera saizi yakachengeteka zvinoenderana nezvaunoda chaiko. Kana ikaiswa pakona yemadziro, hazvidi kuti utarise saizi yakawandisa. Kana ichida kuiswa munzvimbo yakavanda, senge kabati, saizi yesafe iri pamasendimita makumi mashanu uye huremu huri mukati me30kg. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti mazhinji masefa ane kukwirira kweanopfuura makumi mashanu masendimita akashongedzerwa nemavhiri ezasi uye anogona kufambiswa chero kupi. Ikozvino kune hukuru hwakawanda uye maratidziro akachengeteka. Kazhinji, saizi yakakura inogona kupfuura 100cm. Inogona zvakare kuve yakagadzirirwa. Zvinotora mazuva gumi nemashanu kugadzirisa.
10.Bhatiri: yakanangana nemagetsi password isina njodzi. Pamusoro peyakavakirwa-mukati bhatiri, iyo yemagetsi password yakachengeteka kazhinji ine yekunze spare bhatiri bhokisi. Paunenge uchitenga, iwe unofanirwa kutarisisa kuti izere. BOSENDA mabhenji akachengeteka anewo simba rekuratidzira pane iyo pani, iyo inogona kupa yakawanda nyore mukati mukushanda chaiko.
BOSENDA yakachengeteka inopa yakazara yakatarwa yekuchengetedza bhokisi / rakachengeteka, moto-kudzivirira chengetedzo bhokisi / rakachengeteka riine akasiyana mabasa uye tsananguro dzakatsanangurwa pamusoro, huremu hunogona kugadziriswa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi, kiyi yekukiya, yeminwe yekuvhara, password yekukiya inogona kupihwa zvinoenderana zvakasiyana zvinodiwa, zvinhu kubva zvakajairika simbi ndiro kune super yakaoma simbi ndiro, yakagadzirirwa maererano nezvinodiwa zvakasiyana. Kugadzirwa kwemwedzi wega kwemakumi ezviuru zveyuniti, kuendesa nekukurumidza, kudzivirira nguva yekumirira vatengi. Kugadzira pamwe nemhando yepamusoro, kudzora kwakasimba kweese maratidziro.
Pashure: Wedzera zvipikiri zvine screws, epurasitiki yekuwedzera sikuruu, yekuwedzera scew chipikiri yekuwedzera sikuruu, macacable clip
Zvadaro: Angle grinder, kukanganisa kukanda, sando, li-ion chibooreso, maturusi emagetsi
Angle grinder, kukanganisa drill, sando, li-ion dri ...
Pipe wrench, rinorema basa repurasitiki pombi wrench, adj ...
Chishandiso chakaiswa, maturusi emaoko, chigadziriso chemumba, kugadzirisa mota ...
Kuveza matatu akanongedzwa chibooreso, kuveza dr ...
Kuvaka chibooreso zvishoma, yakawanda-inoshanda chiwanikwa ...
Vachikuya vhiri chipasa, nebwe nokuveza chisvo, ste ...